Iwe Mbeu Blogs? | Martech Zone
Iwe Mbeu Blogs?
NeChishanu, Gunyana 26, 2008 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Nzira yekumashure (snicker) mumazuva ekutanga ekubloga, ndakafunga kuti kupindura pane mamwe mablog kwakabudirira zvakanyanya. Ruzhinji rwekukura mumazuva madiki aya rwaikonzerwa nekutora chikamu kwangu mukukurukurirana mune mamwe mablog.
Kunyangwe nekukura kusingagumi kweblog rangu, ini ndinoramba ndichiedza kutsvaga uye kutsvaga matsva mablog ari kunyora zvinyorwa zvemukati munzvimbo dzine hukama dzekufarira. Ini zvakare ndinoedza kuvasimudzira mumatanho angu ezuva nezuva. Nemazana zana emabloggi kunze uko, kune hurukuro zhinji dzekujoinha nadzo.
Chii chinonzi Blog Seeding?
Google uye Technorati Ndidzo nzira dzangu dzekutanga dzekutsvaga mablog dzandisati ndamboshanyira. Unogona kupedza maminitsi mashanu kana gumi pazuva seeding blog uye uwane pachena kuzviuru zvevaverengi vatsva. Blog Seeding iri kungo wedzera kune zvakataurwa neimwe posvo yeblog uye kuona kuti une backlink yakanaka mune yavo ruzivo rwekutaura kublog rako. Usataure kungokanda chinongedzo kunze uko, hazvo - icho chiri spamming. Nyora imwe inomanikidza kopi, rumbidza blogger, kana kupa humwe humbowo kana usiri kubvumirana navo. Pfuma yako inowedzera, kunyanya iwe unogamuchira.
Blog Seeding rakasiyana neComment Spamming
Iko kukurudzira kweBlog Seeding kwakasiyana neComment Spamming. Comment Spamming ngowani nhema SEM nzira yekuedza kutsvaga mablog asingashandise nofollow uye uwane chinzvimbo chepamusoro kuburikidza Backlinks.
Inowedzera kune hurukuro ye blog iri mubvunzo. Pamwe iwe urikutsigira iyo posvo neyekuwedzera hama zvemukati kana kupokana zvirimo zviripo. Chero nzira, ndizvo mushandisi akagadzira zvemukati kuti chero blogger anofanirwa kukoshesa.
Inokuzivisa iwe kune blogger.
Zvinotonyanya kukosha, inokuzivisa iwe kune vateereri veblogger! Usatarisira pasi kuti vangani vanhu vanoverenga mablog uye VERENGA zvakataurwa.
wedzera seeding blog kune bhegi rako rehunyanzvi hwekushambadzira kuvaka chiremera kana kukwidziridza kuziva kwako blog, chigadzirwa, sevhisi kana kambani. Inoshanda mushe mushe!
Tags: seeding blogBloggerBlogging
Mobile Textarea: Vangani Vanyori Vakasiya
Sep 27, 2008 na11: 34 PM
Yakanaka posvo Douglas. Ini ndashandisa nzira iyi zvakanyanya uye pasina kukundikana, inoshanda! Ndakaona kuti wako chaiye haatombofaniri kunetseka nezve kudonhedza chinongedzo mumuviri wekutaura kwako zvachose, kunze kwekunge uchiita izvozvo kushambadzira kwakakosha kukosha kune iyo hurukuro. Kana izvo zvaunofanirwa kutaura zvinechokwadi kushambadzira kuhurukuro, panzvimbo pekungova "neniwo" chirevo, ipapo vashanyi vanozokwezva kune yako blog.
Kusvika pamabhurugwa asina mafambiro anoenda, ese mabloggi angu haana mafi uye ehe, ivo vanokwezva yakawanda spammers. Nekudaro, kutarisa pane asina mabhurogi mablogiki hazvina maturo kune avo vari kutsvaga kuvaka organic kukura. Iko kushomeka kwekusimudzira chinzvimbo chinogashirwa kuburikidza neisina nofollow chinongedzo mumablog blog zvirevo hazvina basa zvachose. Iko kutaura kune mibairo yadzo yechokwadi kuri muhukama hwahunovaka uye kukwezva kwechisikigo kwaunogadzira. Vamwe vanozokurumidza kubatanidza kune ako maposvo zvine muviri kana iwe usinga gare uchipa spam zvirevo zvavo nema link.
Great post! Iwe une muverengi mutsva. 😉
Sep 28, 2008 na7: 24 PM
Semunhu blogger wekutanga, ndanga ndichinyara kutaura pamusoro pemamwe mablog. Yako post yakandigadzirisa.
Chii chinonzi bhurogi risina maturo uye ndinoziva sei kuti ndine imwe?
Aug 6, 2009 na10: 28 PM
Ndatenda Doug. Iyi info yaibatsira kwazvo kwandiri mukuedza kusiyanisa blog seeding vs. spamming kune vangu vashoma mabhizinesi vatengi Izvo zvakare zvakandikurudzira kuti nditaure pane mamwe mabloggi pachangu! 🙂
Sep 22, 2011 na12: 32 PM
Nechimwe chikonzero chisinganzwisisike, ini handikwanise kana kutemera kuTechnorati, asi iri imwe nyaya.
Izvo iwe zvawakatsanangura zvinoshanda mushe kune wega kana indasitiri chaiwo mablog. Kumabloggi emakambani, nzira imwechete haina kushanda nekuti mabloggi emakambani anoonekwa senzira yekusimudzira bhizinesi uye kutambura semhedzisiro.
Ini ndichiri kuzoona blog yemubatanidzwa iyo ine yakakwira mwero wemasheya kana makomendi nguva dzose.
Sep 22, 2011 na1: 20 PM
Kana iyo blog yemubatanidzwa yakaiswa padhuze nekutengesa chigadzirwa, ndinobvuma kuti zvirevo zvakaoma kuuya nazvo. Nekudaro, kana iyo blog iine chinangwa kunze kwekutengesa, kune matani emukana.
https://blog.facebook.com/ - anowana makumi ezviuru zvemashoko. Ndinoona ivo chikuva chemagariro, hazvo… uye pamwe chisaruro sezvo vaine mabhiriyoni evatengi 🙂
http://www.lulu.com/blog/ - kana zvirimo zviri chaizvo, iwe uchaona zvakati wandei chiitiko apa.
Sep 23, 2011 pa 5: 01 AM
Kumabloggi emakambani, sekutaura kwawakaita, iyo blog inofanirwa kuve nekutarisisa kwakakura uye isingarambidzwe kungovhura zvigadzirwa zvako kana masevhisi. Ndanga ndichigadzira zvemhando yepamusoro zvemukati medu blog uye iri doign mushe maererano nekushanya asi kwete munzira yemushandisi chiitiko.
Ini ndicharamba ndichiedza uye nekutenda neruzivo runobatsira.
Gumiguru 7, 2011 na10: 01 PM
Ndatenda Doug! Iyi ipfungwa yakanaka kune isu tese blogger. Ndanga ndiri kutsikisa kublog rangu sechido chekuita. Zvino, ini ndave kutanga kuwana vateveri kubvira ndadzima Blogspot. Ndanga ndichinyora zvirevo, asi ini handina kusanganisira yangu blog link.
Kutenda neruzivo! http://www.nortoncreative.com/rubberchicken/
Jul 11, 2012 na1: 56 PM
Asi kutaura padivi, ndezvipi zvimwe zvaungakurudzira kublog blog seeding? Iwe unoshandisa zvishandiso sePinterest? Reddit kana Digg?